Iindaba Zoshishino - Page 1
Ngaba uyazi ngokwenene ukuba ungayisebenzisa kanjani idashcam yemoto? Ngaba uyazi ngokwenene indlela yokukhetha nokukhetha?
Nokuba ngumqhubi omdala, umqhubi omtsha, umqhubi oyindoda, okanye umqhubi obhinqileyo, bayoyika iingozi neengozi. Kukho irekhodi lokuqhuba kuphela. Namhlanje i-Yingjia Electronic Technology iya kukufundisa indlela yokuthenga irekhodi lokuqhuba.
Zeziphi iindawo ezinokusetyenziselwa iprojektha?
1. Uhlobo lwethiyetha yasekhaya: Uphawu lwayo kukuba ukuqaqamba kukujikeleze ukukhanya kwe-2000 (ngophuhliso lokuqikelela, eli nani liyanda, kwaye umahluko uphezulu), kwaye umlinganiso wenqaku lescreenion ubukhulu becala yi-16: 9. Izibuko leevidiyo ezahlukeneyo zigqibelele, zilungele ukudlala iimuvi......
Intshayelelo yomsebenzi werekhodi yokuqhuba imoto
Kukho imisebenzi emininzi yokurekhoda idatha: Okokuqala, ingozi iyafumaneka, okwesibini, ukudinwa kokuqhuba kunokuthintelwa. Ingxelo eqhubayo inokurekhoda ixesha lokuqhuba komqhubi. Abanye arekhoda banomsebenzi wokukhumbuza. Ukuba udiniwe, unokukhumbuza umniniyo ukuba aphephe ukudinwa.
Utshintsho lwembali lokuhamba kwemoto
Ngokuthandwa kweemoto zabucala nokwanda kweendlela zokuhamba ezinje ngeehambo zokuqhuba, oomatiloshe beemoto baye bathandwa ngakumbi ngabanini bemoto, kwaye bade baba "sisixhobo" esiyimfuneko sokuhamba kwabanye abantu. Abanini bemoto abaninzi bavakalelwa kukuba kukhuselekile ukuhamba nayo, ngakumbi ......